Puntland oo dishay muuqaal duube ka tirsan Daacish | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland oo dishay muuqaal duube ka tirsan Daacish
Ciidamada Maamulka Puntland ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay ku tilmaamay inay ahaayeen kuwii dhigi jiray miinooyinka gobolka Bari, oo uu ka jiray sawir qaade duubi jiray muuqaallada qaraxyada.
Boosaaso, Soomaaliya - Ciidamada Puntland ee loo yaqaan PSF, ayaa sheegay in ay dileen muuqaal duube (Cameraman) ka tirsan Kooxda Daacish ee ku xooggan buuraleyda gobolka Bari, kaas oo dhawaanahaan baraha bulshada ku baahiyay muuqaallo uu ka duubay qarax lala beegsaday Wasiir ka tirsan Puntland.
Muuqaal duubahaan ayaa la dilay isagoo meel kore ka sawiraya laba qarax oo is-xigay oo lala beegsaday ciidamada PSF ee Puntland oo marayey meel ku dhow tuulo lagu magacaabo Xamurre, oo dhaca dhanka bari ee degaanka Balidhidin ee gobolka Bari.
“Xubnaha ay ciidamada PSF dileen waxaa ka mid ahaa nin kaamiro watay oo horey u duubay kolonyo ka tirsanaa ciidamada amniga oo lala beegsaday qarax dhowr maalmood ka hor, laguna baahiyey barta Internet-ka” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay PSF.
26-kii bishaan oo Sabtigii ku beegneyd ayay aheyd markii sawir qaadahaan uu duubay muuqaalka qarax lala beegsaday kolonyo uu hoggaaminayay Wasiirka Amniga Puntland oo booqasho ku joogay degaaanka.
Kooxaha ka dagaallama Soomaaliya ayaa qarash badan ku bixiya in ay hormariyaan laantooda Iclaamka si ay u soo jiitaan dad badan, wararkoodana u gaarsiiyaan dunida oo dhan.